… Okwangoku… - iGeofumadas
NgoSeptemba, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ngethuba xa ukukhangela kwimixholo yokutshintsha kuqala ukukhangela ... Ndiyabelana nawe enye yezinto ezilungileyo eziye ndazibona kumnye wabacebisi bam.
Njengoko bendingafuni ukukubandakanya kwi-imeyile yokuvalelisa ngokubanzi nakwiziko (uyinto eyenye) Ndibeka ingxelo yokuba:
Ukuba i 09: 30 28 imini ka Juni kunyaka 2013 emva kokuzalwa iNkosi yethu, osayine ngenxa asisule ixesha labo zokuhlala neofisi kanye kule ndawo ekuthiwa Honduras.
Ubume bam obuncinci bokubonisa iimvakalelo kunye nokubonisa iinyembezi kuyaziwa, nangona, ngenxa yokunyaniseka, kufuneka ndivume intshukumo yangaphakathi yosizi kunye nokungonwabi. Kwaye kwindawo nganye okuyo ushiya into kunye nento kunye nawe. Okwesibini zizinto ezilungileyo, eyokuqala ndiyathemba nazo.
Jingo I singenako ukuyiphika le nto iye yaba mnandi ukusebenza nani nonke, kwaye ngelixa wena iingcali ezinkulu ngalinye kwicala lakho ngoyaba ukuba abantu abangcono (nto leyo luboniswa koko kwafuneka ukuba anyamezele ).
Andikunqweneleli thamsanqa, kuba ngokuqinisekileyo uya kuba nayo. Kuphela kukuba uqhubeke neenyawo zakho emhlabeni kwaye bengakuthengiseli izibuko ezincinci (into ebalulekileyo ihlala iyinto ebalulekileyo kulo naliphi na ilizwe) kwaye amaSpanish aseSpain ayazi malunga noku.
Unyaka omkhulu kubo bonke, kwaye ndikubona
I-Agur eta yokugqibela ikusiko dugu
Ndiza kuba nexesha isifingo ukulungiselela into kunye nemvakalelo okuzisa smoothie Herba Ubomi xa kuphela neempempe isandi abalindi, kwaye ukuntlontlozela TV bekhumbula ukuba ijelo zasekuhlaleni wathumela abantu bakhe ukuba ukuphumla.
Ndihlala ndisithi, ekuphela kwendlela yokushiya into oyenzayo, kwaye uyixabise kakhulu ... kukufumana enye into enomdla kubugcisa be-geosmoking ekuphela kwendlela endiyaziyo- ukuya kumda. Kwaye loo mzuzu ufikile namhlanje xa umjikelo uvala kwaye kuqala entsha.
Okwangoku, akukho okuninzi okunokuthethwa. Kukho imisonto yokudibanisa, ubudlelwane bokuphinda busetyenziswe, ubuhlobo obugcinwayo… ayonto intsha le. Yintoni entsha: Dibanisa iqela elikwinqanaba eliphezulu leqela leendlela ezahlukeneyo, uyile inkqubo kwiParadigm, usebenzisa iMetric 3 kunye nokucinga ngokuzisa iModeli yoLawulo loMhlaba kwiLizwe ... yi-adrenaline eyaneleyo yokwahlula umda phakathi komsi wekofu kunye nohlobo oluhlanganisiweyo Ukuphefumlelwa.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-OkMap, eyona nto ibhetele yokwenza kunye nokuhlela iimephu zeGPS. MAHHALA
Post Next I-900 ibhengeza iiprojekthi zokugqibela zeBean eziphefumlelweyo zeMbasa 2013Okulandelayo »